Ukuphilisa iikristali kuyasebenza? Uhlaziyo olutsha ngo-2021
Ukuba ukwilizwe elinye lonyango, sele uve malunga neekristal. Igama elinikwe ezinye izimbiwa, njenge-quartz, okanye i-amber. Abantu bakholelwa kwiipropathi ezifanelekileyo zempilo.
Ukubamba iikristali okanye ukuzibeka emzimbeni wakho kucingelwa ukuba kukhuthaza ukuphilisa ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo nangokomoya. Amakristali ekuthiwa enza oku ngokunxibelelana ngokuqinisekileyo nomhlaba wamandla omzimba wakho, okanye chakra. Ngelixa ezinye iikristali zokuphilisa kufanele ukuba zinciphise uxinzelelo, ezinye kuthiwa ziphucula uxinzelelo okanye ubuchule.
Iimpawu zempilo engaqondakaliyo yokunyanga iikristali
Akumangalisi ukuba, abaphandi benze ezimbalwa izifundo eziqhelekileyo kwiikristali. Kodwa enye, eyabuyela emva ngo-2001, yagqiba kwelokuba amandla ezi zimbiwa “akwiliso lombonayo.”
Kwi-European Congress ye-Psychology eRoma, abantu be-80 bazalisa i-questionnaire eklanyelwe ukulinganisa iqondo labo kwiimeko eziqhelekileyo. Kamva, iqela lokufunda lacela wonke umntu ukuba acamngce ngemizuzu emihlanu. Ngoxa ubambe i-quartz yangempela okanye i-crystal yobuxoki eyenziwe ngeglasi.
Emva koko, abathathi-nxaxheba baphendule imibuzo malunga neemvakalelo abazive xa becamngca ngekristal yokuphilisa. Zombini iikristali zokwenyani nezinyaniweyo zavelisa imvakalelo efanayo. Kwaye abantu abavavanye phezulu kwiphepha lemibuzo elinenkolelo yeparanormal bathambekele ekubeni namava amakhulu kunabo bahlekise ngeparanormal.
“Sifumanise ukuba abantu abaninzi babanga ukuba banokuziva bengaqhelekanga. Ngelixa ubambe iikristali, ezinje ngokutswina, ubushushu kunye neentshukumo. Ukuba besinokubaxelela kwangaphambili ukuba le yinto enokwenzeka, ”utshilo uChristopher French, unjingalwazi kwizifundo zengqondo kwiGoldsmiths, kwiDyunivesithi yaseLondon. Ngamanye amagama, iziphumo ezichaziweyo zibangelwe ngamandla eengcebiso, hayi amandla eekristali. ”
Uninzi lophando lubonisa ukuba isiphumo se-placebo sinokuba namandla kangakanani. Ukuba abantu bakholelwa ukuba unyango luya kubenza bazive ngcono. Uninzi lwazo luziva lungcono emva kokuba lufumene unyango. Nokuba izazinzulu zingqinisile ukuba unyango alunantsingiselo.
Ukuthabatha kwakhe yinto onokuyilindela kwisayensi. Ewe kunjalo, ngokuqinisekileyo ichanekile ukuthi iikristali azinazo naziphi na iipropathi eziyimfihlakalo zempilo ezinikezelwe kubo ngabasebenzisi.
Kodwa ingqondo yomntu yinto enamandla, kwaye kunzima ukutsho ngokucacileyo ukuba iikristali azisebenzi, ukuba uchaza "umsebenzi" njengonikeza uncedo.
UTed Kaptchuk, unjingalwazi kwezamayeza kwiHarvard Medical School uthi: “Ndicinga ukuba uluvo loluntu nolwezamayeza nge-placebo yinto ebubuxoki okanye ubuqhetseba. Kodwa uphando lukaKaptchuk malunga ne-placebo lubonisa ukuba iindlela zalo zonyango zinokuba "zezokwenyani" kunye "nezomeleleyo". Ngelixa engafundanga ziikristale, kwaye akazukuphawula ngobunyani bazo okanye nantoni na enokwenza namanye amayeza. U-Kaptchuk ubhale ukuba unyango olwakhelwe-ngaphakathi kwi-placebo lungathathelwa ingqalelo njengenxalenye yokusebenza kwawo, kwaye izibonelelo ezibangelwa yi-placebo kufuneka zikhuthazwe, zingagxothwa.
Oogqirha abaninzi bayakholelwa kumandla e-placebo. Uphononongo lwe-BMJ lowama-2008 lwafumanisa ukuba phantse isiqingatha samagqirha aphononongiweyo axela ukusebenzisa unyango lwe-placebo ukunceda abaguli babo. Ngokwesiqhelo, ugqirha ucebisa ukuba unciphise iintlungu kwi-counter okanye i-vitamin supplement. Nangona kungakhange kuboniswe kwiimpawu zesigulana. Uninzi lujonge umkhuba wokumisela unyango lwe-placebo njengolwamkelekileyo ngokokuziphatha, ababhali baqukumbela.
Ukubamba iikristali zokuphilisa, ewe, akufani nokuginya iAdvil. Musa ukulindela ukuba ugqirha wakho acebise ngekristali kutyelelo lwakho olulandelayo. Ukusuka kwimbono yamayeza aqhelekileyo kunye nesayensi esekwe kubungqina, uphando olukhoyo lubonisa ukuba ziyafana neoyile yenyoka. Kodwa uphando malunga nefuthe le-placebo lubonisa ukuba neoyile yenyoka inokuba nezibonelelo kwabo bakholwayo… funda ngakumbi >>
iqoqo lamatyeizityeba zethu zendalo